Iyo Apple Watch inozogona kuteedzera chirwere cheParkinson nekuda kweApple API nyowani | Ndinobva mac
Maitiro eApple Watch ndeyekuva, kwete chete shamwari yako yakanaka kana iwe uchidzidzira zvemitambo, asi zvakare nzvimbo yehutano paruoko rwako. Zvatove akati wandei ari matambudziko imomo iyo Apple Watch yakazivisa kumuridzi wayo kuti aive nematambudziko emoyo, iye wekupedzisira aine nguva yekuita yakakwana kuti akwanise kuenda kunzvimbo yezvehutano nekukumbira chiremba wake mhedzisiro inopihwa neApple smart wachi.
Nekudaro, Apple inoenderera ichishanda mukukwanisa kuwana chishandiso chine simba zvakanyanya uye pamatanho akawanda pane kuongorora matambudziko emoyo. Iyo nyowani yeKushandisa Programming Interface (API) yakanangana neMovement Disorder yakatangwa nguva pfupi yadarika. Uye iwe unoda kuyedza kuti ugone tevera chirwere cheParkinson.
Iyi API nyowani inoda kuteedzera zuva rese zvichibva pamafambiro maviri eParkinson mafambiro. Mumwe wavo akadaro kusadzora kufamba -dyskinesia- iye munhu pazororo. Uye imwe ndiyo iyo kudedera kana kubvunda. Neiyi API nyowani, kunyorera kuchakwanisa kuongorora kusagadzikana uku zuva rese uye nekudaro kukwanisa kuwana zviratidzo zvehosha inouraya isati yazviratidza.
Saizvozvowo, Apple uye vesaenzi vanoramba vachishanda kuti vaunze mhinduro zhinji pachiuno chedu. Zvakare, mukufananidza ivo vanga vachishandawo kuti vakwanise kuteedzera uye kuongorora - zvese nekutenda OngororoKit- matambudziko senge autism, melanoma, uye pfari.
Asi kudzokera kuParkinson's, nemhinduro iyi yeApple Watch, vanachiremba vachakwanisa kuva nemaonero akazara kupfuura apo murwere paanoenda kukiriniki kunoitwa bvunzo dzakakodzera. Nenzira iyi ivo vanozogona kutevedzera shanduko yezuva nezuva yemurwere nekurasa iyo ruzivo mumasisitimu uye nekudzidza kana zvave nani kana kuwedzerwa.
Zvino, ndichakamirira vanachiremba uye vanogadzira kuti vatange kushanda pane mamwe maturusi izvo zvinogona kuwana zvakanyanya kubva kune iyi nyowani API. Saka mumwedzi iri kuuya tinogona kuve nemaapplication matsva mune izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch ichakwanisa kuteedzera chirwere cheParkinson nekuda kweApple API nyowani
North Carolina yatove inopa ruzivo rwekufambisa veruzhinji paApple Mepu